* Handel: L ပုံသဏ္ဍာန်
* သံမဏိတုံး၊ အချင်း 24mm;
* တံခါးကို 180 ဒီဂရီသို့လွှဲဖွင့်ပါ။
* အောက်ခြေတွင် ဗီရိုအသေး၊
မော်ဒယ် ပြင်ပအရွယ်အစား(mm) အထူ(မီလီမီတာ) ပုံးအရွယ်အစား(မီလီမီတာ) ခွဲဝေပေးခြင်း N.W (ကီလိုဂရမ်)
ဇ ဒဗလျူ ဃ တစ်အိမ် ခန္ဓာကိုယ် ဇ ဒဗလျူ ဃ စင် အံဆွဲ
MC-43 ၄၃၀ ၃၈၀ ၃၁၀ ၂၀ ၃၀ ၄၃၀ ၄၃၀ ၃၆၀ ၀ယ်တယ်။ ၁ ၄၄
MC-52 ၅၂၀ ၃၈၀ ၃၆၀ ၂၀ ၃၀ ၅၂၀ ၄၃၀ ၄၁၀ ၀ယ်တယ်။ ၁ ၅၆
MC-57 ၅၇၀ ၄၀၀ ၃၆၀ ၂၀ ၃၀ ၅၇၀ ၄၅၀ ၄၁၀ ၁ ၁ ၆၂
MC-62 ၆၂၀ ၄၄၀ ၃၈၀ ၂၀ ၃၀ ၆၂၀ ၄၉၀ ၄၃၀ ၁ ၁ ၇၃
MC-67 ၆၇၀ ၄၄၀ ၃၈၀ ၂၀ ၃၀ ၆၇၀ ၅၄၀ ၄၃၀ ၁ ၁ ၇၇
MC-72 ၇၂၀ ၄၆၀ ၄၀၀ ၂၀ ၃၀ ၇၂၀ ၅၁၀ ၄၅၀ ၁ ၁ ၈၀
MC-82 ၈၂၀ ၄၈၀ ၄၂၀ ၂၀ ၃၀ ၈၂၀ ၅၃၀ ၄၇၀ ၁ ၁ ၈၅
MC-92 ၉၂၀ ၅၂၀ ၄၄၀ ၂၀ ၃၀ ၉၂၀ ၅၇၀ ၄၉၀ ၁ ၁ ၁၃၃
MC-102 ၁၀၂၀ ၅၆၀ ၄၈၀ ၂၀ ၃၀ ၁၀၂၀ ၆၁၀ ၅၃၀ ၂ ၁ ၁၃၁
MC-122 ၁၂၂၀ ၅၆၀ ၄၈၀ ၂၀ ၃၀ ၁၂၂၀ ၆၁၀ ၅၃၀ ၂ ၁ ၁၆၅
MC-152 ၁၅၂၀ ၆၂၀ ၅၃၀ ၂၀ ၃၀ ၁၅၂၀ ၆၇၀ ၅၈၀ ၃ ၁ ၂၂၅
1.Q1။ ထုတ်ကုန်ပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏လိုဂိုကို ပုံနှိပ်နိုင်ပါသလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ ထုတ်ကုန်ပေါ်မှာ သင့်လိုဂိုကို ပုံနှိပ်လို့ရပါပြီ။
2.Q2။ ထုတ်ကုန်ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်မလား။
A- ဟုတ်ကဲ့။ သင့်လိုအပ်ချက်အရ မတူညီသောအရွယ်အစား၊ ထုပ်ပိုးမှု၊ အရောင်နှင့် လိုဂိုကို ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ နမူနာရပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နမူနာအခကြေးငွေကို ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူသူမှ မှာယူသည့်အခါ ပြန်အမ်းပါမည်။
1. ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် ISO 9001 နိုင်ငံတကာအရည်အသွေးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို အောင်မြင်ပြီးဖြစ်သည်။
2. ကျွန်ုပ်တို့သည် CE, ROSH, FCC အောင်မြင်ပြီးဖြစ်သည်။
3. ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM ကိုထောက်ခံပါသည်။& ODM ဝန်ဆောင်မှု။
4. ကျွန်ုပ်တို့သည် တင်းကျပ်သော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် စံသတ်မှတ်ချက်စည်းမျဉ်းများကို အမြဲလိုက်နာခဲ့ပြီး နှစ်ဖက်စလုံးအတွက် အချိန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို ချွေတာပြီး သင့်အတွက် အမြင့်ဆုံးအကျိုးခံစားခွင့်များကို ယူဆောင်လာပါသည်။
2004 ခုနှစ်မှစတင်၍ တရုတ်နိုင်ငံ၊ Foshan City၊ Guangdong ပြည်နယ်တွင် တည်ရှိပြီး Foshan Weierxin Safe Co., Ltd သည် ဧရိယာ 23,000 စတုရန်းမီတာကျော်ကို လွှမ်းခြုံထားပြီး ဝန်ထမ်း 100 ကျော်ရှိပြီး ဘေးကင်းလုံခြုံသော ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံ 10 နှစ်ကျော် ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ၎င်းသည် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ အရောင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများပါရှိသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Weierxin Safe သည် မီးခံနိုင်သော မီးခံသေတ္တာများ၊ အိမ်ဘေးကင်းများ၊ ရုံးသုံး မီးခံသေတ္တာများ၊ ဟိုတယ် ဘေးကင်းများ၊ နာရီအကာအရံများ လုံခြုံသော၊ သံမဏိ ဗီရို၊ သေနတ်ဘေးကင်းများ၊ ဖိုင်များ လုံခြုံသော၊ ငွေသားသေတ္တာများ၊ ဗောက်တံခါး နှင့် အခြား မှန်လုံလုံခြုံရေး ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် CE၊ ROHS၊ FCC နှင့် fireproof လက်မှတ်တို့ကို ကျော်ဖြတ်ပြီးဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ် ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ 500,000 ကျော်ဖြင့် အိမ်၊ ရုံး၊ ကျောင်း၊ ဆေးရုံ၊ ဟိုတယ်စသည်ဖြင့် နယ်ပယ်များစွာတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေကြပါသည်။ Weierxin Safe သည် လူများနေထိုင်၊ အလုပ်နှင့် ကစားသည့်နေရာများတွင် စိတ်၏ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့် အကာအကွယ်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် အယုံကြည်ရဆုံး၊ အယုံကြည်ရဆုံးသူရှိသည်။ အတန်းထဲတွင် အကောင်းဆုံးတန်ဖိုး၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူမှု၊ ကြာရှည်ခံမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ အရည်အသွေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ကတိပေးသော ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်များတွင်။ Weierxin Safe တွင် ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် အရောင်းကိုယ်စားလှယ် 1000 ကျော်ရှိပြီး သစ္စာရှိဖောက်သည်5သန်းကျော်ရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်လည်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကို တင်ပို့လျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြည်တွင်း နှင့် နိုင်ငံခြား အမှတ်တံဆိပ် တံဆိပ်များစွာကို OEM ပေးသွင်းသူ ဖြစ်ပါသည်။ 2004 ခုနှစ်မှ စတင်၍ ထုတ်ကုန်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် မြှင့်တင်ထားပြီး လိုက်နာရန် သစ္စာရှိ သုံးစွဲသူများလည်း ရှိနေသေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းမွန်သော OEM ဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့ကို တည်ဆောက်ထားသည်။& OMD အတွေ့အကြုံ။OEM/ODM မှာယူမှုများကို ကြိုဆိုပါသည်။ R မှာ အားသာချက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။&ဃ၊ အထူးသဖြင့် မီးခံသေတ္တာများတွင် သုံးစွဲသူဘေးကင်းရေး တပ်ဆင်မှု။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကို လုပ်ကိုင်ရာတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံဖြင့်၊ ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဒီဇိုင်းနှင့် စီးပွားဖြစ်ပံ့ပိုးမှုတွင် ပေးအပ်ထားသော အတွေ့အကြုံနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော မဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်အဖြစ် ရှုမြင်ခံရပါသည်။
အရွယ်အစား- H430*W380*D310mm* မီးအဆင့်- 60 မိနစ်* လော့ခ်- အီလက်ထရွန်းနစ် ဒစ်ဂျစ်တယ်သော့* သံမဏိတုံး၊ အချင်း 24 မီလီမီတာ* တံခါးကို 180 ဒီဂရီ လွှဲဖွင့်ပါ။* လေးလံသောတာဝန်ရှိစတီးလ်ပတ္တာများ* အတွင်းပိုင်း ချိန်ညှိနိုင်သော စင်